Mitombo | Zeevou
Ka manana orinasa mandray vahiny ianao, ary mitady hampitombo azy io. Aiza no manomboka? Manoro hevitra izahay ny hanomboka amin'ny fotony. Avelao i Zeevou automate ny asanao mahazatra mba hahafahanao mifantoka amin'izay tena zava-dehibe. Miasà amin'ny orinasanao fa tsy ao anatiny. Ahoana no ahafahan'i Zeevou manampy amin'izany? Izahay dia namolavola endri-javatra isan-karazany izay mamela anao hampitombo ny tombom-barotra isaky ny singa, sady manohana anao rehefa mampitombo ny isan'ny singa tantananao.
Ahoana no ahafahan'i Zeevou manampy ahy hitombo?
Voalohany indrindra, mila mahazo antoka ianao fa manamaivana ny loza ateraky ny haavon'ny olona ambany ianao. Mba hanampiana an'ity dia mamela anao hifandray amin'ny fotoana tena izy amin'ny fantsona maro be. Aza manahy: nanamboatra endri-javatra ihany koa izahay mba hiantohana fa tsy ho very maina amin'ny fitahirizana firaketana ny fotoan'ny mpitantana anao. Amin'ny fampiasana Zeevou, azonao atao ny manara-maso mora foana hoe ohatrinona ny famandrihana tsirairay avy aminao amin'ny komisiona. Ny rindrambaiko manara-penitra dia mamela anao hivarotra indray ny alina asanao eo am-piandrasana ny fanafoanana miandry ny OTA ho voavaha tanteraka.
Angony ny mailaka tena izy
Raha vantany vao azonao ny fitarihanao dia fantatray fa tsy misy zava-dehibe kokoa noho ny fikolokoloana azy ireo. Izay no antony, na dia ataon'ny OTA ho sarotra aminao aza ny manangana tahiry ho an'ny vahiny ho an'ny tsena, manana ny lamosinao izahay! Ny dingana fanamafisana ny famandrihana 5-dingana anay dia manome antoka fa manangona adiresy mailaka tena izy ianao ho an'ireo vahininao rehetra.
Ankoatr'izay, mba hanampiana anao hampitombo ny haavon'ny toerana onenanao sy hampihenana ny komisiona OTA anao, dia manome tranokala maoderina tsara tarehy sy sariaka SEO izahay mba hampandehanana ireo famandrihana mivantana ireo ary hampitombo ny tombom-barotrao.
Ahoana no ahafahan'i Zeevou manampy ahy hitantana ny fitomboako?
Rafitra natao ho an'ny mizana
Tsy mila miahiahy momba ny fitomboana lavitra loatra na haingana loatra. Zeevou dia mamela anao hitantana ny mpamatsy vola anao, manome azy ireo fidirana amin'ny fanaovana tatitra tena izy raha Zeevou kosa no mikarakara ny kaontinao sy ny fizarazarana tombony azo. Ankafizo ny fahalalahana feno famaritana amin'ny modely fifanarahana rehetra, na mitsitsia fotoana amin'ny alàlan'ny fampiasana an'io ho an'ny fananana marobe. Ny fampiasa amin'ny taha-be indrindra dia manampy anao hametraka ny vidiny amin'ireo karazana singa marobe ao anatin'ny indray mandeha.
Fampiasana mpampiasa tsy voafetra
Miaraka amin'ny ambaratonga lehibe dia misy ny mpiasa mahay. Saingy tsy olana izany raha mampiasa an'i Zeevou ianao. Azonao atao ny manome ambaratonga isan-karazany ny fidirana amin'ny mpiasa raha ilaina izany, na mamorona mombamomba ny orinasa raha toa ka outsourcing ny asanao ianao. Ampitomboy ny vondron'ny mpiantoka anao, ny mpikarakara trano ary ny mpanampy virtoaly, fa aza manimba ny fitantanana ny harenanao.
Aza very mihitsy
Jereo ny fanitarana ny orinasanao any amin'ny tanàna hafa, ary na any amin'ny firenena hafa. Zeevou dia hamokatra ho azy ny kalandrie tokana misy mponina marobe ao an-tanàna ho anao, ary hamela anao hitantana firenena maro amin'ny vola sahaza azy.